Ny dikan-teny vaovao dia mampiseho ny famolavolana ho avy amin'ny iPhone 14 Pro | iPhone News
Angel Gonzalez | 27/05/2022 17:00 | Nohavaozina amin'ny 28/05/2022 12:30 | iPhone 14
ny tsaho sy famoahana momba ny iPhone 14 Pro dia mitohy, indrindra raha jerena fa tena te hanosika an'izany i Apple Pro. Fantatray nandritra ny volana maromaro fa ireo fitaovana vaovao izay havoaka amin'ny volana septambra amin'ity taona ity dia hitondra fiovana lehibe eo amin'ny sehatry ny famolavolana. Saingy tsy ny rehetra. Apple dia maniry ny hanatsara ny fanovana indrindra amin'ny modely Pro, mamela ny modely mahazatra, manafoana ny modely mini. IRETO Ny dikan-teny vaovao dia mampiseho ny tsaho rehetra momba ny iPhone 14 Pro, miaraka amin'ny endrika boribory kokoa, rafitra fakantsary vaovao ao aoriana ary eo anoloana misy endrika 'pill'.
1 Fiovana famolavolana tena lehibe amin'ny iPhone 14 Pro
2 Loko vaovao sy hery lehibe ao aoriana
Fiovana famolavolana tena lehibe amin'ny iPhone 14 Pro
Ny iPhone 14 dia ho tonga eo amin'ny fiainantsika amin'ny volana septambra amin'ity taona ity. Hanao lahateny vaovao i Apple izay hanehoany ny havaozina manontolo amin'ny findainy ary hanome lalana ho an'ny taranaka fahefatra ambin'ny folo. Betsaka ny tsaho momba ity fitaovana ity ary rehefa mandeha ny volana dia mihamitombo hatrany sy voafaritra.
Tamin'ity indray mitoraka ity i Jon Prosser sy Ian zelbo Nandeha niasa izy ireo mba hampiray ny tsaho rehetra amin'ny fandikana izay mitovy araka izay azo atao amin'ny andrasana amin'ny iPhone 14 Pro. Nifantoka tamin'ny modely Pro izy ireo satria, araka ny nolazaiko. Apple dia mikasa ny hanao fitsambikinana taranaka amin'ny maodely Pro, mamela ny modely mahazatra mitovy amin'ny iPhone 13 amin'izao fotoana izao amin'ny ambaratonga famolavolana.
Loko vaovao sy hery lehibe ao aoriana
Ny zavatra voalohany tokony hisarihana ny saintsika dia ny eo anoloan'ny fitaovana: manao veloma amin'ny notch izahay mba hanomezana lalana ny rafitra True Depth boribory amin'ny endrika 'pill'. Manonona manokana ny fampihenana bevel. Izany, miaraka amin'ny fiovan'ny notch, dia mamela hampitombo kely ny efijery ary miteraka fahatsapana fahafenoana mifanohitra amin'ireo taranaka teo aloha.
Ny ampahany hafa manaitra dia hita any aoriana. Ny rafitra fakantsary aoriana vaovao dia mikendry ny hanao dingana goavana amin'ny iPhone 14 Pro. Hanana isika rafitra fakantsary lehibe kokoa misy sensor 48-megapixel ho fanampin'ny 57% lehibe kokoa noho ny iPhone 13 Pro. Ity rafitra ity dia mamela ny firaketana amin'ny 8K. Na izany aza, ny fampitomboana ny haben'ny takelaka misy ny fakantsary dia midika izany Apple dia mety tsy maintsy manafoana ny bezels ao ambadika mba hisorohana ny tsy fitovian'ny maso. Namakafaka ity olana ity izahay East Lahatsoratra:
Farany, eo amin'ny ambaratongan'ny fandikana, a iPhone 14 Pro modely volomparasy. Toa mieritreritra ny hanao dikan-teny voafetra amin'ity loko ity i Apple ho fanampin'ny loko grafita, volafotsy ary volamena izay efa fantatsika tamin'ny taranaka hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 14 » Ny dikan-teny vaovao dia mampiseho ny famolavolana ho avy amin'ny iPhone 14 Pro
Apple dia manolo ny iTunes Pass amin'ny Apple Account Card amin'ny iOS 15.5